INGIRIIS MASTIFF DOG MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA - EEYAHA
Ingiriis Mastiff Dog Macluumaadka iyo Sawirada
Sassy the Mastiff wuxuu ku yimid kaalinta 3aad guud ahaan Xarunta Gaarka ah ee Mastiff isagoo leh 79 qoraal. Ch. SalidaDelSol MistyTrails Sassy R.O.M., sawirka waxaa iska leh MistyTrails Mastiffs
Ingiriisigii Hore Mastiff
The Old English Mastiff waa eey aad u weyn. Mastiffku wuxuu leeyahay madax weyn, culus, oo laba jibbaaran oo leh joogsi calaamadeysan oo u dhexeeya indhaha dhexdooda. Afka waa inuu ahaadaa kalabar dhererka dhakada. Indhaha dhexdhexaad dhexdhexaadka ah ilaa mugdiga mugdiga ah ayaa si ballaaran loo kala saaray iyadoo leh maaskaro madow oo ku wareegsan. Sanka midabkiisu waa mugdi. Dhagaha yar, ee V-ga u eg waxay la jaan qaadayaan dhakada waana midab madow. Ilkaha waa inay ku kulmaan qaniinyada maqaska laakiin qaniinyada waxoogaa hoosta ka xariiqda ayaa sidoo kale la aqbali karaa giraanta show-ga iyadoo la siinayo ilkaha oo aan soo bixin marka afku xirmayo. Dabada waa mid aad u saraysa oo leh saldhig ballaadhan, oo ku foorareysa dhibic isla markaana gaaraya hocks. Midabada koofiyada waxaa ka mid ah fawn dahab ah, fawn khafiif ah, abrikot, qalin, shabeel ama gogol.
Mastiff waa eey aad u ballaaran, awood badan, oo muruqyo leh. Heerarka xukunku way kala duwan yihiin, xitaa isla qashin isku mid ah, laakiin badanaa waxaa loogu yeeraa qof weyn. A eey waardiye dhashay , Mastiffku marar dhif ah buu qayliyaa, laakiin waa dabeecaddiisa inuu difaaco dhulkiisa iyo qoyskiisa, waana waardiye aamusan halkii uu ka hadli lahaa. Markii ku soo xadgudbay la qabto eygu wuxuu u eg yahay inuu ku haysto meel adag, ama isagoo ku xiraya koonaha ama dushooda korkiisa halkii uu ka noqon lahaa weerar dhan. Uma baahnid inaad tababarto Mastiff-kaaga si aad u ilaaliso. Si kasta oo ay saaxiibtinimo u tahay, haddii ay dareento khatar waxay si dabiici ah u ilaalin doontaa keligeed illaa mulkiilayaashu u joogaan inay si kale u sheegaan. Is-kalsooni iyo feejignaan, eeyahaani waa kuwa dulqaad badan waxaana loo arkaa inay ku fiican yihiin carruurta. Caqli leh, deggan, xitaa dabacsan oo qunyar socod ah, noocani waa mid aad u ballaaran oo culus. Waxay si fiican uga jawaabaan shirkad adag, laakiin debecsan, tababar bukaan ah. Waxay jecel yihiin inay ka farxiyaan oo waxay u baahan yihiin hoggaan badan oo aadanaha. Si wanaagsan u dhexgeli iyaga si looga hortago inay ka fogaadaan shisheeyaha. Milkiilayaashu waxay u baahan yihiin inay noqdaan kuwo adag, deggan, iswaafaqsan, oo kalsooni ku qaba hawo maamul dabiici ah oo leh la xiriir Mastiff xukunkaas lama doonayo. Haddii lala dhexgalo hoggaan sax ah waxay la jaan qaadi doontaa eeyaha kale. Mastiffku wuxuu u egyahay duurxul , hindhiso iyo khuuro dheer. Waxay noqon kartaa xoogaa adag tahay in la tababaro . Ujeedada tababarka eeygan ayaa ah gaaro heerka hogaamiyaha xirmada . Waa dareen dabiici ah eey ey leedahay ku dalbo baakadeeda . Markii aan dadku waxay la nool yihiin eeyaha , Waxaan noqonay xirmadooda. Xirmada oo dhami waxay lashaqeysaa hal hogaamiye. Khadadka si cad ayaa loo qeexaa xeerarna waa la dejiyaa. Sababtoo ah a eygu wuu wargaliyaa xanaaqiisa ku saabsan cabaadka iyo aakhirka qaniinyada, aadanaha kale oo dhan WAA INAY uga sarreeyaan si ka sareysa eyga. Dadku waa inuu noqdaa kuwa go'aamada gaara, eeyaha maahan. Taasi waa sida kaliya ee adiga xiriirka eygaaga waxay noqon kartaa guul dhameystiran.
madow iyo cadaan buluug ah oo yar yar oo cadaanyo ah
Dhererka: Ragga u jira 30 inji (76 cm) Dumarka dhererkoodu yahay 27 inji (69 cm)
Miisaanka: Ragga qiyaastii 160 rodol (72 kg) Dheddigga qiyaastii 150 rodol (68 kg)
Mid ka mid ah noocyada ugu culus, nin Mastiff ah ayaa ka badnaan kara 200 rodol.
Iska jir sinta dysplasia. Sida eydaasi yihiin u nugul ubax , quudin laba ama saddex cunto yar maalintii, halkii aad ka cuni lahayd mid weyn. Sidoo kale u nugul cudurka 'CHD', xanuunka 'gastric torsion', ectropion, PPM, siilka 'hyperplasia', xusulka dysplasia iyo PRA. Mararka qaarkood la arko waa wadno-dhiig.
Mastiffku wax fiican kuma qaban doono aqalka dhexdiisa haddii si ku filan loo jimicsado. Iyagu gudaha kama hawlgalaan gudaha iyo daarad yar ayaa sameyn doonta.
Mastiffs waxay u janjeeraan inay caajis noqdaan laakiin waxay lahaan doonaan taam ahaansho iyo farxad haddii la siiyo jimicsi joogto ah. Sida eeyaha oo dhan, Mastiff Mareykan ah waa in lagu qaataa socod maalinle ah si looga caawiyo sii deynta tamarta maskaxeed iyo tan jireed. Waxay ku jirtaa dabeecadda eyda in la socdo. Inta lagu jiro socodka eeyga waa in lagu sameeyaa ciribta dhinaceeda ama gadaasha qofka haya hogaaminta, sida maskaxda eeyga hogaamiyaha hogaamiya wadada, hogaamiyahaasina wuxuu ubaahan yahay inuu yahay aadanaha. Had iyo jeer waa in lagu xaraashaa meel fagaare ah.
Ilaa 5 ilaa 10 eey
Jaakad jilicsan oo timo gaaban ah ayaa fududahay in la hagaajiyo. Ku caday burush adag oo tirtir oo ku tirtir xoogaa tuwaal ah ama jahwareer dhammaystiran dhalaalka. Maydho ama shaambo qallaji markay lagama maarmaan noqoto. Noocani waa celcelis daadiya.
Mastiffkii Ingiriisiga waxaa lagu aasaasay Ingiriiska. Nooc aad u duug ah, waxaa lagu sawiray taallooyinkii Masaarida horaantii 3000 BC. Noocani wuxuu ka barbar dagaalamay askarta Ingriiska 55 BC. Kaysar wuxuu keenay raxan Mastiff ah magaalada Rome halkaas oo eeyaha lagu soo bandhigayay inay yihiin gladiators Arena isla markaana lagu qasbay inay la dagaallamaan dagaalyahanada aadanaha, libaaxyada, baararka dibida, bahashinta bahasha iyo dagaalka ey-ka-eyga. Markii dambe waxay caan ku noqdeen beeraleyda England halkaas oo looga adeegsaday inay noqdaan ilaaliye, ilaalin yeey iyo ugaarsato kale oo khatar ah iyo eey wehel ah. Qarnigii siddeed iyo tobnaad Mastiff-ka waxaa lagu sharaxay: 'Sida libaaxu bisad u yahay, sidaas oo kale ayuu mastiff u ekaadaa marka loo eego eeyga.' Waxaa la rumeysan yahay in Mastiff uu yimid Mareykanka on Mayflower ah. Markii dambe inbadan ayaa la soo dhoofiyey. Sida noocyada badankood dhammaadka Dagaalkii Dunida ll, noocyadu waxay ku dhowaayeen bakhtiyey gudaha England. Eeyaha ayaa laga soo dhoofiyay USA iyo Canada waxayna mar kale si wanaagsan ugu dhisan yihiin Ingiriiska. Qaar ka mid ah hibooyinka Mastiff-ka waxaa ka mid ah: ilaalin, ilaalin, shaqada booliska, shaqada millatariga, goobid iyo samatabbixin, iyo culeyska oo jiido.
Ardaygan waxaa cunay MistyTrails Mastiffs. Waxay ahayd mid guriga ku jabtay iyadoo isticmaaleysa Habka khaldan . Halkan waxaa lagu muujiyey 4 bilood jir. Pup hooyadiis waa Thumbelina oo hadda Canada ka muujineysa lambarka koowaad ee Mastiff ee dalka. Lahaanshaha sawirka MistyTrails Mastiffs.
Cora the English Mastiff puppy at 4 months - sawirka waxaa iska leh MistyTrails Mastiffs.
Cora the English Mastiff puppy at 2.5 bilood jir - sawir waxaa iska leh MistyTrails Mastiffs.
Duvall the purebred Mastiff at 2 sano jir— 'Duvall waa eey badbaadin ah oo ka soo kabanaya qalliin sinta looga sameeyay. Aad ayey u deggan tahay oo si wanaagsan ayey u dhaqantey.
'Kuwani waa sawirro Mastiffkeygii hore ee Ingiriisiga Mastiff oo wata bisadayda Jupe. Waxaan halkan u dirayaa si aan u muujiyo sida ay eeydu dhab ahaan u noqon karaan. Labadan saaxiibo. Sadie waxaa laga soo iibsaday abuure ku yaal Columbus, Ohio, miisaankiisuna wuxuu ku dhow yahay 170 lbs. baaritaanka caafimaadka xoolaha ee ugu dambeeya. Waxay haatan ka weyn tahay 2 sano jir sawirradan. '
'Waxaan u adeegsanay farsamooyinka' Bark Busters 'si aan u tababarno iyada. Iyadu waa eey gudaha / dibedda ah oo wareega buuxa ee dayrka leh xayndaab aan la arki karin iyo qoorta. Waxay la socotaa eey yar iyada oo ay weheliso 'Labrador Retriever' da 'weyn oo madow ah. Labadii kitt ayaa la baray iyada markay ahayd 1 iyo badh. Waxay leedahay dabeecad aad uwanaagsan oo aad u jilicsan oo jecel dhammaan xubnaha qoyska (oo ay ku jiraan bisadaha). '
Sassy the English Mastiff iyo iyada qashin ka kooban 11 eeyo yaryar oo Mastiff ah at 5 toddobaad jir, xushmad sawir MistyTrails Mastiffs
Leo the English Mastiff puppy at 8 toddobaad jir, oo miisaankiisu yahay 14 rodol
Leo the English Mastiff puppy at 6 bilood jir, oo culeyskiisu yahay 60 rodol
Iron Hills Mastiffs iyo Argentine Dogos, qadarin sawir leh ee Phoebus
Tigger the English Mastiff
'Tani waa Amon, oo ah 5 jir jir Ingiriis Mastiff ah (lab ah). Isagu waa eeygii ugu fiicnaa ee abid aan yeesho dheellitir iyo adeec badan. Wuxuu jecel yahay qof walba oo qoyska ka tirsan wuxuuna tusaa kalgacal qof walba. Isagu waa nin caqli badan waxaanan aaminsanahay inuu matalaadkan sifiican ugu ekaado muuqaalkiisa iyo dhaqankiisa. Waxaan ka badbaadiyey 2 sano ka hor markii aan ka iibsaday nin si xun ula dhaqmay. Wuxuu culeyskiisu ahaa 55 kg (121 rodol) haddana waa 95 kg (209 rodol). Amon waa eey aad u faraxsan oo waxaan jecel nahay inuu ku yeesho qoyskeena, gaar ahaan wiilkayga Kevin.
Eeg tusaalooyin badan oo Mastiff ah
Sawirada Mastiff 1
Sawirada Mastiff 2
Sawirada Mastiff 3
eeyaha ka bilaabma r
6 bilood jir eey biyo ah oo reer Portugus ah
dhigayo hormuudka Irish muqisho sarkaal oo dahab ah
chow chow chow nooc sirdoonka ah